Xaaladda Ay Ku Sugan Yihiin 4 Kamid Ah Maal-Qabeenadii Sucudiga Ahaa Ee Loo Xidhay Musuq Maasuqa | Biyoguurenews.com
Home Wararka Xaaladda Ay Ku Sugan Yihiin 4 Kamid Ah Maal-Qabeenadii Sucudiga Ahaa Ee...
Xaaladda Ay Ku Sugan Yihiin 4 Kamid Ah Maal-Qabeenadii Sucudiga Ahaa Ee Loo Xidhay Musuq Maasuqa
Wargeyska Bloomberg ee kasoo baxa dalka mareykanka ayaa faafiyay warbixin ku saabsan xaaladda ay ku sugan yihiin 4 kamid ah maal qabeenadii u dhashay wadanka Sucudiga ee loo xidhay la xidhiidha Musuq maasuqa kuwaas oo dhawaan lagusii daayey lacago madax furasho ah.
Warbixinta Bloomberg ayaa lagu sheegay in qaar kamid ah dadkii la xidhay intii ay soconeysay xamladii loogu magac daray “ka hortagga musuq maasuqa” ay xabsiga kasoo beexen iyagoo qarka usaaran inay fuqaro noqdan marka loo fiiriyo hantidi ay lahaayeen markii ay xabsiga galayeen.
Raggan oo ka koobna 87 qof oo hantiilayaal ah ayaa lagu xidhay Hotelka Retez Karliton ee ku yaala magaalada Riyadh, halkaas oo ciidanka Amaanka maamulka Aala Sucud ay ku waardiyeynayen illaa markii dambe qaar iyaga kamid ah ay lacagahooda isku furteen.
Max’med Bin Salmaan ayaa la wareegay kala badh saamiyada shirkadaha waaweyn ee ganacsatadan waxaana kamid ah ninka maalqabeenka ah ee lagu magacaabo Waliid Bin Dalaal oo warbixintu sheegayso in uu qarka usaaranyahay ceyrtoobid.
Maxamed Bin Salman ayaa sidoo kale la wareegay shirkaddi qaabilsaneyd dayactirka Xaramka Makka, wuxuuna xabsiga dhigay milkiilayashii shirkaddaa.
Tan iyo markii uu Salman kusoo biiray hoggaanka dalka Sacuudiga waxay cabsi weyn soo wajahday maalqabeenada dalka Sacuudiga iyo Amiiro badan kuwsoo oo la dhigay xabsi halka qaar kalana laga xayiray Hantidii ay lahaayeen.
Maxamed Bil Salman ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin aad u fudud isla markaasna go’aansado inuu meesha ka saaro cid kasta oo uu u arko inay halis ku tahay hoggaankiisa Sacuudiga.
Previous articleDawlada Kenya oo Xidhiidhkii Dublamaasi u jartay dawlada farmaajo,
Next articleWasiirka Arimaha Dibada Somaliland oo ka hadlay Tuhunka Soo baxay ee In ruushku Doonayo saldhigiisii Berbera